ဖြားနာကိုကျခဲမှုတှခေျေါလာမဲ့ ရာသီအကူးအပွောငျး - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဘယျအရာမှ မမွဲတဲ့ ဒီလောကကွီးနဲ့ လူသားတှမှော သိသိသာသာဖွဈစေ မသိမသာဖွဈစေ တဈခုမဟုတျတဈခုတော့ နစေ့ဉျပွောငျးလဲနကွေရပါတယျ။ သီခငျြးစာသားလေးနဲ့ပွောရရငျတော့ ‘အခွအေနတှေဟော အမွဲတမျး..ပွောငျးလဲနတေယျ အခဈြရယျ..’ပေါ့။ ‘မတညျမွဲခွငျး’ဆိုတာတဈခုကလှဲရငျ လောကမှာ ကနျြတာ ဘာမှ မမွဲပါဘူး။
ကောငျးကောငျးဆိုးဆိုး ဘယျဘကျကိုပဲပွောငျးပွောငျး တညျငွိမျနတေဲ့ အခွအေနတေဈခုကနေ အသဈတဈခုခုကို ကွုံရတဲ့အခါမှာ ခကျြခငျြးရောကျလာတဲ့ သူငယျခငျြးကတော့ ‘နသေားမကမြှု’ ပေါ့။
ပိုဆိုးပါတယျ။ ‘နသေားမကမြှု’ဆိုတဲ့ ရိုးရိုးသားသား သူငယျခငျြးလေး တငျမကပဲ လူဆိုးတှဖွေဈတဲ့ ‘သကျသောငျ့သကျသာမရှိမှု’နဲ့ ‘ဖြားနာ ကိုကျခဲမှု’ ဆိုတာတှပေါ ရောကျလာတတျပါတယျ။ ခုလို ‘နှခေေါငျခေါငျ’ကနေ ‘ရဖေောငျဖောငျ’ ဖွဈသှားတဲ့ မိုးရာသီအကူးမှာတော့ ဖြားနာကိုကျခဲမှုတှေ ပုံမှနျထကျပိုဖွဈတတျပါတယျ။
? ဒီရာသီမှာ ဖြားနာခေါငျးကိုကျ ဘာလို့အဖွဈမြားတာလဲ ??
?တုပျကှေးဖွဈစတေဲ့ Virus ပိုးတှကေို ကာကှယျဖို့ လိုအပျတဲ့ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ခုခံအားစနဈက ဒီလိုအေးတဲ့ ရာသီဥတုမှာ ပိုကနြတေတျလို့ ပိုဖြားတတျပါတယျ။
အဖြားကွောငျ့ ခေါငျးကိုကျနိုငျသလို ကိုယျလကျနာကငျြကိုကျခဲတာတှပေါ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
?မိုးရစေိုလိုကျ နပေူမိလိုကျနဲ့ စိုလိုကျခွောကျလိုကျ ပူလိုကျအေးလိုကျ အခွအေနတှေကွေောငျ့ ပိုဖြားတတျသလို ခေါငျးလညျးပိုကိုကျတတျပါတယျ။
? Barometric pressure ဆိုတဲ့ လထေုဖိအားအပွောငျးအလဲကွောငျ့လညျး ခေါငျးကိုကျတတျပါတယျ
Migraine headache နဲ့ Cluster headache လို ဆိုးဝါးတဲ့ ခေါငျးကိုကျဝဒေနာမြိုးတှေ ထကွှလာတတျပါတယျ။
? Humidity ဆိုတဲ့ လထေုစိုထိုငျးဆ ပိုမိုမွငျ့တကျလာတာကွောငျ့လညျး ခေါငျးပိုကိုကျစတေတျပါတယျ။
? အဆဈအမွဈ ရောငျရမျးကိုကျခဲတဲ့ ရောဂါအခံရှိသူတှမှောလညျး မိုးအေးအေးမှာ ရောဂါဟောငျးတှေ ပွနျထကွှလာတတျပါတယျ။
?ဘယျလို ကာကှယျမလဲ ??
ရာသီဥတုတှကေတော့ ကမ်ဘာတညျသ၍ ပွောငျးနသေလိုပဲ ဖြားနာကိုကျခဲတာတှလေညျး ဆကျဖွဈနကွေဦးမှာပါပဲ။ ရာသီဥတုတှေ မပွောငျးလဲအောငျ လုပျလို့မရပမေဲ့ မဖြားဖို့ မနာဖို့တော့ တတျနိုငျသမြှ ကွိုးစားကာကှယျလို့ရပါတယျ။
နံပါတျတဈကတော့ ကိုယျခံအားစနဈကို မွှငျ့တငျထားဖို့လိုပါတယျ။ ဒီအတှကျ
?အစားအသောကျမြှတစုံလငျ အာဟာရပွညျ့ဝအောငျ စားရပါမယျ
?Vitamin C ကွှယျဝတဲ့ အသီးအနှံတှေ စားသငျ့ပါတယျ
?နှဈစဉျထိုးရတဲ့ ရာသီတုပျကှေးကာကှယျဆေးကလညျး တုပျကှေးကွောငျ့ မဖြားဖို့ အတျောအသငျ့ ကာကှယျပေးနိုငျတာမို့ ထိုးထားသငျ့ပါတယျ။
? ဒီလောကျ ကာကှယျတဲ့ကွားက ဖြားပွီဆိုရငျရော ??
တျောရုံ ခေါငျးကိုကျနဲ့ အဖြားအနာတှအေတှကျကတော့ Paracetamol(Acetaminophen)ပါဝငျတဲ့ ဆေးတှေ သောကျရငျသကျသာစပေါမယျ။ ကိုယျခံအားပွနျကောငျးလာဖို့အတှကျ ကောငျးကောငျးအိပျ ကောငျးကောငျးစား ကောငျးကောငျးနားဖို့လိုပါတယျ။ ဒါနဲ့မှ မသကျသာရငျတော့ ဆရာဝနျပွရပါတော့မယျ။
ဘယ်အရာမှ မမြဲတဲ့ ဒီလောကကြီးနဲ့ လူသားတွေမှာ သိသိသာသာဖြစ်စေ မသိမသာဖြစ်စေ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ နေ့စဉ်ပြောင်းလဲနေကြရပါတယ်။ သီချင်းစာသားလေးနဲ့ပြောရရင်တော့ ‘အခြေအနေတွေဟာ အမြဲတမ်း..ပြောင်းလဲနေတယ် အချစ်ရယ်..’ပေါ့။ ‘မတည်မြဲခြင်း’ဆိုတာတစ်ခုကလွဲရင် လောကမှာ ကျန်တာ ဘာမှ မမြဲပါဘူး။
ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး ဘယ်ဘက်ကိုပဲပြောင်းပြောင်း တည်ငြိမ်နေတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကနေ အသစ်တစ်ခုခုကို ကြုံရတဲ့အခါမှာ ချက်ချင်းရောက်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းကတော့ ‘နေသားမကျမှု’ ပေါ့။
ပိုဆိုးပါတယ်။ ‘နေသားမကျမှု’ဆိုတဲ့ ရိုးရိုးသားသား သူငယ်ချင်းလေး တင်မကပဲ လူဆိုးတွေဖြစ်တဲ့ ‘သက်သောင့်သက်သာမရှိမှု’နဲ့ ‘ဖျားနာ ကိုက်ခဲမှု’ ဆိုတာတွေပါ ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ ခုလို ‘နွေခေါင်ခေါင်’ကနေ ‘ရေဖောင်ဖောင်’ ဖြစ်သွားတဲ့ မိုးရာသီအကူးမှာတော့ ဖျားနာကိုက်ခဲမှုတွေ ပုံမှန်ထက်ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
? ဒီရာသီမှာ ဖျားနာခေါင်းကိုက် ဘာလို့အဖြစ်များတာလဲ ??
?တုပ်ကွေးဖြစ်စေတဲ့ Virus ပိုးတွေကို ကာကွယ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားစနစ်က ဒီလိုအေးတဲ့ ရာသီဥတုမှာ ပိုကျနေတတ်လို့ ပိုဖျားတတ်ပါတယ်။
အဖျားကြောင့် ခေါင်းကိုက်နိုင်သလို ကိုယ်လက်နာကျင်ကိုက်ခဲတာတွေပါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
?မိုးရေစိုလိုက် နေပူမိလိုက်နဲ့ စိုလိုက်ခြောက်လိုက် ပူလိုက်အေးလိုက် အခြေအနေတွေကြောင့် ပိုဖျားတတ်သလို ခေါင်းလည်းပိုကိုက်တတ်ပါတယ်။
? Barometric pressure ဆိုတဲ့ လေထုဖိအားအပြောင်းအလဲကြောင့်လည်း ခေါင်းကိုက်တတ်ပါတယ်
Migraine headache နဲ့ Cluster headache လို ဆိုးဝါးတဲ့ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာမျိုးတွေ ထကြွလာတတ်ပါတယ်။
? Humidity ဆိုတဲ့ လေထုစိုထိုင်းဆ ပိုမိုမြင့်တက်လာတာကြောင့်လည်း ခေါင်းပိုကိုက်စေတတ်ပါတယ်။
? အဆစ်အမြစ် ရောင်ရမ်းကိုက်ခဲတဲ့ ရောဂါအခံရှိသူတွေမှာလည်း မိုးအေးအေးမှာ ရောဂါဟောင်းတွေ ပြန်ထကြွလာတတ်ပါတယ်။
?ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ ??
ရာသီဥတုတွေကတော့ ကမ္ဘာတည်သ၍ ပြောင်းနေသလိုပဲ ဖျားနာကိုက်ခဲတာတွေလည်း ဆက်ဖြစ်နေကြဦးမှာပါပဲ။ ရာသီဥတုတွေ မပြောင်းလဲအောင် လုပ်လို့မရပေမဲ့ မဖျားဖို့ မနာဖို့တော့ တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားကာကွယ်လို့ရပါတယ်။
နံပါတ်တစ်ကတော့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအတွက်
?အစားအသောက်မျှတစုံလင် အာဟာရပြည့်ဝအောင် စားရပါမယ်
?Vitamin C ကြွယ်ဝတဲ့ အသီးအနှံတွေ စားသင့်ပါတယ်
?နှစ်စဉ်ထိုးရတဲ့ ရာသီတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကလည်း တုပ်ကွေးကြောင့် မဖျားဖို့ အတော်အသင့် ကာကွယ်ပေးနိုင်တာမို့ ထိုးထားသင့်ပါတယ်။
? ဒီလောက် ကာကွယ်တဲ့ကြားက ဖျားပြီဆိုရင်ရော ??
တော်ရုံ ခေါင်းကိုက်နဲ့ အဖျားအနာတွေအတွက်ကတော့ Paracetamol(Acetaminophen)ပါဝင်တဲ့ ဆေးတွေ သောက်ရင်သက်သာစေပါမယ်။ ကိုယ်ခံအားပြန်ကောင်းလာဖို့အတွက် ကောင်းကောင်းအိပ် ကောင်းကောင်းစား ကောင်းကောင်းနားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါနဲ့မှ မသက်သာရင်တော့ ဆရာဝန်ပြရပါတော့မယ်။